FJKM Ankadifotsy Hetsika vide grenier-Tolo-tànana ho fampandrosoana / Samy hafa / Autres / Accueil - FJKM Ankadifotsy
Hetsika vide grenier-Tolo-tànana ho fampandrosoana23/04/2018 09:24
Hatao ny Sabotsy 26mai 2018 tontolo andro izao indray ny hetsika « vide-grenier ». Ny fandraisana ny entana hamidy dia ao amin’ny IFR ny 28-Aprily, 05-mai ary ny 12-mai samy amin'ny 9 ora maraina.
Tolo-tànana ho fampandrosoana
Hatao ny Sabotsy 26 mai 2018 tontolo andro izao indray ny hetsika « vide-grenier » amin’ity taona 2018 ity izay hotanterahina eny amin’ny sekoly IFR.
Toy ny mahazatra, ho hitantsika amin’izany kojakoja isankarazany toy ny akanjo, kiraro, entana fampiasa ao andakozia, sy karazana entana maro samihafa . Ireo entana ireo dia natolotry ny mpianankavin’ny finoana hamidy ho lasa vola hoenti-manana hiatrehana ny asa izay ataon’ny fiangonana amin’ny alàlan’ny vaomieran’ny fampandrosoana VFD. Anisan’izany ny fampitaovana Evanjelistra, ho fanohanana sy fiantohana mpianatra .
Marihina fa fanomezana maimaimpoana avy amin’ny mpino eto am-piangonana ireo entana hamidy ireo, misy ny vaovao, misy koa ireo efa niasa anefa mbola tsara ka havadika ho vola mba hamatsiana ireo asa atao eto anivon'ny Fiangonana ireo.
Ny fandraisana ny entana hamidy dia ao amin’ny IFR ny 28-Aprily, 05-mai ary ny 12-mai amin’ny 9 ora ka hatramin’ny 1ora. Anterina fa fanomezana « don » ireo entana ho raisina hamidy ireo ka tsy hanomezana tambiny ireo mpanome. Koa entanina isika hanomana sahady amin’ny fanolorana maimaimpoana ny entana izay heverintsika ho mendrika amin’ny fanohanana izany asa izany hoy ny vaomiera. “Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray » Asan’ny Apostôly 20 : 35 tapany farany.